I/G/Waajjira Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Indaashaw Birhaanuu marii haala yeroo irratti hojjettoota waajjirichaa waliin taasisaniin, Caffeen akka bakka bu'aa ummataatti bulchiinsa gaariifi kenna tajaajilaan walqabatee jijjiiramni bu'uuraa akka dhufuuf cimee ergama isaa bahachuu qaba. Milkaa'ina hojichaaf ammoo, gaheen hojjettoota waajjirichaa olaanaadha jedhan.
Kana milkeessuu keessatti, ofiif jijjiiramanii jijjiirama fiduun hawaasa tajaajila nurraa barbaadu qulqullummaafi haqa qabeessummaan tajaajiluun amantaafi itti quufiinsa ummata keenyaa dabaluun qormaatilee nu mudatan kamiyyuu injifannoon waltumsinee irra ce'uu qabna jedhan.
Itti fufuunis, Buusaa Gonofaa Oromiyaa irrattis mari'atameera.
Toorbee kana 5964
Ji'a kana 84216
2008 irraa eggalee 5571492